Qarmada Midobay oo soo dhaweeysay Ansixinta Gudiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka – Radio Daljir
Qarmada Midobay oo soo dhaweeysay Ansixinta Gudiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka
Luulyo 7, 2015 3:09 b 0
Talaado, Luuliyo 07, 2015 (Daljir) — Ergayga Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaalia, Danjire Nicholas Kay ayaa soo Dhaweeyay Ansaxinta uu Baarlamaanka Somalia shalay Ansixiyay, sagaalka xubnood ee guddiga Madaxa-bannaan ee Dooroshooyinka Qaranka.
“Magacaabista Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Qaranka waa guul aad muhiim u ah, kuna qotonta ujeedooyinkii lagu gaari lahaa nabad iyo dib u dhiska Qaranka. Ujeedooyinkan oo ku qoran barnaamijka Higsiga Somalia,” ayuu yiri Danjire Nick Kay.
Sidoo kale, Ergayga ayaa hadalkiisa ku daray. “Baarlamaanka Federaalka Somalia wuxuu ka ciyaaray door muhiim ah oo lagu dhisi lahaa guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka Qaranka, kaasoo Waafaqsan Dastuurka Federaalka ee KMG-ka ah. Waxaan si Dhaqso leh uga dhur-sugaynaa in guddigani la dhiso, korna loogu qaado Awooddiisa Waxqabad, sida dhisidda xoghayta guddiga.”
Ugu dambeyn, Nick Kay wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in Qaramada Midoobay ay diyaar u tahay inay kala shaqayso dowlada federaalka Somalia sidii guddigan loogu suuro-gelin lahaa inuu howshiisa u billaabo si dhaqso leh.
Guddig Amniga Soomaaliya oo shir ka yeeshay adkaynta amniga Muqdisho